राजनीति गर्ने रामकुमारी झाँक्रीको छोटो समयमा ठूलो कम्पाउण्डभित्र गगनचुम्बी भवन कसरी ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राजनीति गर्ने रामकुमारी झाँक्रीको छोटो समयमा ठूलो कम्पाउण्डभित्र गगनचुम्बी भवन कसरी ?
काठमाडौ । रामकुमारी झाँक्री नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद हुन् । उनी राजनीतिमा लागेको त्यति धेरै समय भएको छैन । उनी तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को अध्यक्ष समेत भैसकेकी छन्।
उनको जन्म २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीका रूपमा भएको हो। ४३ बर्षको उमेरमा उनीसँग अहिले राजकाजको पदपनि छ । पैसापनि त्यति नै कमिएको छ । उनले २०६६ माघ २९ मा धनकुटा जिल्लाका पशुपतिबाबु पुरीसँग विवाह गरिन्। उनी त्यतिबेला शाखा अधिकृत मात्र थिए ।
अहिले भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा उपसचिव छन् । पति पशुपतिलाई कमाउ अड्डामा राखेकी छिन् । विवाह अघि उनी धेरै जसो समय बुद्धनगरमा भाडामा बसिन् । सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएकी उनी र उनका श्रीमानको अहिले राजधानी काठमाडौको मुटु शंखमुलमा पाँच तले घर छ ।
उनीहरुको घर हेर्न टोपी फुकाल्नुपर्छ । नत्र ढल्नेछ । कति आलिशान छ । हिजो पक्राउ गर्न प्रहरी पुग्दा गेटले छेकेको देख्नुभएको नै होला । ठूलो कम्पाउण्डभित्र गगनचुम्बी भवन यति छिटो कसरी ? सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।